Mhemberero mabheji 2014
Ndezvipi zvishongo zvino zvakasvibiswa - mhinduro kumubvunzo uyu inofadza kuvasikana vakawanda. Zvishongo zvevakadzi zvemafashoni munguva ino zvakasiyana kwazvo, hatigoni kutaura izvozvi zvino mumufananidzo wemuenzaniso mumwechete. Scekete dza2014 dzakasimbiswa neyese muchengeti wemavara uye zvinhu zvavanenge vaita. Hazvina mhosva kuti iwe unotenga kupi, inogona kuva inodhura mabhetique boutique uye misika inonyatsozivikanwa. Panyaya yekusarudza zvipfeko zvemafashoni, zvakakosha kutungamirirwa nemafungiro ako, iwe pachako "I", iwe unofarira, uye kwete zvawaona kune mumwe munhu kana mumagazini, TV. Mumwaka uno, vashandi vacharangisa zvishongo zvinotakura zviratidzo, zvinoreva zvakasiyana, zvakasiyana-siyana, zvinogona kunzi "talismans", rudzi urwu rwezvishongo zvaunogona kuona mumusangano weVienneenne Westwood. Kutarisa zvinoreva zvisiri izvo, zvishongo izvi zvinotarisa zvisingatarisirwi uye zvinonakidza, somuenzaniso, chigadzirwa chemavara uswa hwakasvibirira, iyo ine chimiro chechirwisi chechirindiro, chidimbu chayo chinenge chimiro chakakura pane zvimwe zviratidzo.
Ndezvipi zvishongo zvishongo zvinotungamirira mafashoni evaya vanoda zvimwe zvinodiwa? Vasikana vaduku vanokurudzirwa nemhando dzakawanda dzepurasitiki dzepurasitiki dzinodiwa uye dzakakura. Mabhuruku, mabheji makuru anonyanya kukosha munguva ino, izvo zvisingakwanisi asi kutora pfungwa. Coco Chanel anozivikanwa akapfekedza zvishongo zvakadaro, paaipfeka zvipfeko zviduku. Vakadzi vese mishonga yakadaro yakagadzirwa nemadhaimondi, platinum, ndarama, bohemian - kubva pamatanda kana ganda, vasikana vechi-gothic - vane ruvara rutsvuku neminzwa.
Zvishandiso zveganda zvishongo uye zvigadzirwa kubva pamatombo echisikigo
Sezvinenge zvatozivikanwa, mumutambo we-matatu-dimensional zvishongo, zvinogona kuitwa zveganda, simbi, plastiki. Kureba kwechikamu ichocho kunogona kubva kubva pachigamba kusvika kuhokwe. Mifananidzo yematehwe mabhandi anoshandisa kuiswa kwematombo nenzira yezvipembenene zvakasiyana-siyana, zvakadai sevigurufri, nyoka, ndiko kuti, kusimbiswa kune zvezvisikwa, unogona kuzviona mumutsara waRoberto Cavalli. Zvishongedzere zvishongo kubva kumatombo echisikigo hazvinakidzi kudarika iyi nguva, idzi dzakasviba maparera, uye inonyorera amethyst, uye inoyevedza yakaisvonaka. Uye zvishongo zvekare zvegoridhe zvine emerald, sapafire, diamond, ruby. Zvishongo zvakadaro zvinogona kunge zvakakura, zvakakanganiswa, nezvimwe zvakasiyana-siyana zvekushongedza.
Swimwear - Rhizha 2014
Marc & Andre - mafashoni emafashoni kubva kuFrench brand
Bvudzi rakagadzirwa nevhudzi refu dzisina bongo 2016
Mabheji madzimai anoshongedza 2014
Leather Jackets 2016
Red pedicure - inonakidza neil design ideas chero ipi zvayo
Zvishandiso zvishongo mukutonga 2017 - maitiro anozvino, novelties uye mamiriro
Zvipfeko zvakanakisa zvikuru zve 2015
Nzira yekudzora mwana anorwara sei?
Slimming soda chai
Mutambo wevakadzi Vakakwana 2016
Chirwere chePycycystic chinetso
Nzira yekupukuta mhombwe inokura sei?
Toxicosis mukudzivirira pamuviri - kurapwa
Belgrade - zvitsva
Jikisi settee yekicheni duku
Dyya imbwa yepamusoro: kuverenga
Unofadza sei kubika huku?
Mifananidzo heroes maoko mavo
Hurumende Harry naMichelle Obama vakazarura wechipiri Invictus Games
Mifananidzo yakaitwa nematanda nemaoko
Carpaccio we tomato
Farrell Williams nemudzimai wake vari kumirira mwana wechipiri